DAARINTA MURAAYADAHA WAX LAGU SAMEEYO. TILMAAMAHA TALAABOOYINKA IYO BUUG-GACMEEDKA: SIDA LOO DALBADO LOOGANA TIRTIRO XADHIG KA YIMAADA DARBIYADA IYO DAARADAHA CUSUB IYO DABAQYADA. WAXAAN NADIIFINNAA SEERAHA - SAMEE NAFTAADA
Fidinta deyrka - waa dhibaato, sidaas awgeed badanaa waa ku kalsoon tahay masters. Laakiin marka laga reebo laftirka laftiisa, waxaa sidoo kale jira dayax gacmeedyo u dhaxeeya jajabyada, taas oo sidoo kale u baahan in wax laga qabto. Marxaladdan waa suurtogal in la sameeyo adiga keligaa, taas oo aad hadda u arki karto adiga.
Wixii daaweynta seeraha waxay ku daboolaan isku dhafka noocyada kala duwan, sida:
Saas oo saldhig u ah. Waa wax fudud - geeddi-socodka diyaarinta sibidhka Portland, cinjirka ama qallafsanaha ayaa lagu daraa, ka dibna ku qasan biyo. Qalab fudud oo wax ku ool ah oo xitaa kuwa bilawga ah la shaqeyn karo: isku dhafku waa mid caag ah oo uma baahna xirfad gaar ah diyaarintiisa. Si fiican u ilaaliyaa, laakiin qolka musqusha ama qolalka kale ee leh qoyaan badanaa badanaa looma isticmaalo. Qalab yar oo qaali ah oo isku dhafan. Noocyo badan oo ah midabyo ayaa kuu oggolaanaya inaad doorato kala soocida hoosta midabka foornada.
Synthetic. Qeybta ugu weyn waa epoxy ama dib u furan. Iibsashada qalabkaas oo kale, waxaad arki doontaa in dhoobada cirifka ayaa sidoo kale lagu xayeysiiyay qallajiye. Marka la isku qasinayo, tiro badan oo caag ah ayaa la helaa kaas oo u adkeysanaya qoyaanka iyo kuleylka heerkulka, oo aan la fiiqin.
Silikon (waxay sidoo kale yihiin shaabbadeeye). Dhab ahaantii, waa isku dar ah silikoon iyo vernik, inta badan akrillic. Ha u ogolaan qoyaanka, laakiin si dhakhso ah ayaa loo tirtiray. Kala duwanaansho kale - codsigu wuxuu u baahan yahay khibrad iyo xirfad.
Doorashada qalab la mid ah, fiiro gaar ah u yeelo ballaaran ee seerka iyo dhumucda taayirka: kuwani waa sifooyinka ugu muhiimsan ee loo baahan yahay in lagu beegsado.
Waa muhiim! Ku soco dukaanka, qaado hal fayle oo adiga kugu leh - tani waxay si weyn u fududaynaysaa doorashada.
Xidid kale: haddii, inta uu socdo geedi-socodka, foornada waxaa loo dhigay muraayad bareer ah (mararka qaarkood waxay dhacdaa), waxay ka fiican tahay in la qaato qaabdhismeed xooggan oo aan "kaliya" qabin "seam naftiisa laftiisa, laakiin sidoo kale wuxuu xajiyaa dhinacyada dhinaciisa ee taarikada.
Ha ilaawin qorshaha midabka, ama halkii ay xulasho:
Goobaha dhulka ah looma daaweyn karo isku dhafan yaryar - tani waa ugu yaraan wax aan macquul ahayn.
Muujinta iftiinka ee xadhigga ayaa si siman u xireysa muraayadda shakhsi ahaan hal unug, halka habka mugdiga ahi uu u kala soocayo jajab.
Xaaladda muraayadaha madhacadaha kala duwan, midabka ayaa la doortaa iyadoo isha lagu hayo dhulka. Tusaale ahaan, qol yar oo dabiici ah ayaa ku habboon taayirka ugu da'da yar - tani waxay u muuqan doontaa inay kor u qaadeyso qolka. Guryaha ballaaran waxay ku haboonaan doonaan isku dar ah.
Dareemaha xasilinta ee seerka (cawl cagaaran, beige iyo kuwo kale) ayaa loo isticmaalaa in lagu shaqeeyo maro badan oo midab leh oo lagu riday qaabka masaajidka.
Marka la samaynayo seeraha derbiga, waa wax macquul ah in qulqulka ka soo horjeeda codka daboolka (iyo isla waqtiga isku mid ah midabka faahfaahinta gudaha).
Ma taqaanaa? Muuqaalka hore ee foostada dhoobada wuxuu ahaa lebis daboolay qaro weyn (ilaa 1 cm) lakabka glaze. Tiknoolajigaan ayaa si firfircoon loogu adeegsaday Baabulkii qadiimiga ahaa
Markaad go'aansatid inaad dooratid isku darka, weydii iibiyaha haddii ayan waxba ka beddeli doonin midabka geedi socodka.
Marka lagu daro isku dhafka laftiisa, waxaad u baahan doontaa "sahlan" sahlan ee shaqada:
Spatula oo leh naqshad caag ah (xajmiga ballaaran ee fargeetada, geeska oo dhan waa inuu ahaadaa). Loogu iibiyo iyo xirmooyin nuxurka caagagga ah ee kala duwan ee kala duwan.
Faleerarka loo isticmaalo dabaqa.
Baaldi kaas oo isku dar ah la diyaarin doono.
Ku darso qalajiyaha maydka.
Nadiifi shukulaatada iyo isbuunyada - waxay saaraan qashin dheeraad ah.
Burcad yar yar ama rikoodh yar ayaa lagu dari karaa liistadan (waxay dhammaan ku xiran tahay qoto dheer ee seerka iyo qaababka korka). Qalabka wax lagu rakibay ama mindi si aad uga saarto lakabka hore ayaanan faragelin. Haddii cement grout la iibsado, muraayadaha ammaanka iyo gacmo-gashi gacmaha ah ayaa faa'iido leh.
Dhamaantood waxay ku bilaabmaan diyaar. Algorithm waxay ku xiran tahay darbiyada hore iyo gogosha cusub, laakiin waxyaabihii ugu horreeyay ee hore.
Xaaladda marka gabadha hore ay hoos u dhacday ama ay ku jirto daboolka, laakiin looma qorsheyneynin in loo wareejiyo foornada, u dhaqmaan sida soo socota:
Lakabka hore ayaa la jilciyey iyada oo qoynta biyaha.
Markaas waa la xoqay. Tani waxaa jira qalab gaar ah - boorso leh qaab ah cutter oo leh dhinac toosan. Inkasta oo shaqooyin badan oo horey u-shaqeyn leh ciddiyaha u baahan yahay saxsanaanta.
Hannaanka la sameeyay waxaa lagu dhajiyaa daboolka fangaska. Amniga, nidaamkani waa soo noqnoqonayaa, sugitaanka ilaa kubada ugu horeysa ee la qabadsiiyo (taas oo si gaar ah muhiim ugu ah meelaha u dhow qubayska ama waaskada).
Waa muhiim! Haddii se'aanka hore ee si adag loo qabsado oo aan laga saari karin gebi ahaanba, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daboolo astaamaha hoose ee cusub (dabcan, waa in la qalajiyaa).
Tababbarradu waxay muujinaysaa in shamiitada iyo dabeecadaha cinjirka la saaro iyada oo aan wax badan lagu dadaalin. Laakiin si aad uga qaadid epoxy waa inuu qaataa dareeraha gaarka ah. Waa in si taxadar leh loo isticmaalo - isku day in aad dareeraha ka ilaaliso dareeraha. Ka dib markaa, waxay ku sii jirtaa in ay ka qaadaan boodhka ka soo baxa (dharka qalalan iyo nadiifiye qalab ayaa kaa caawin doona tan).
Si aad ugu shaqeysid "cusub" bilow "wax aan ka horeyn 2 maalmood ka dib marinta: Foornada waa in lagu dhajiyaa dusha.
Xaqiijinta in ay hayso xeelad, adoo samaynaya wax-qabadka soo socda:
Gawaariye guri ama mindi ayaa ka saaraya dhammaan iskutallaabta calaamadaha.
Kala saar paraffin ama haraaga sonkorta (haddii loo isticmaalo).
Si fiican u tirtir marada foornada maro qalalan.
Ha illoobin inaad illaa hadda aad u tagto in qalabka wax lagu nadiifiyo ee nadiifiyaha ah - sidaas nadiifi qashinka, oo aan helin maryaal.
Wax walba, waxaa suurtagal ah in la diyaariyo xal.
Isku darka waa la bixiyaa qadar weyn, oo mid walbana waa lagu iibiyaa baako taas oo ay jirto wax barid ah. Waxaa jira dhammaan faahfaahinta diyaargarowga halabuurka: qadarka alaabta qalalan iyo biyaha (ama cinjirka), heerkulka iyo heerka isticmaalka.
Ma taqaanaa? Magaalada Jarmalka ee Metlach, waxaa weli jira shirkad gaar ah oo soo saarka foornada yar-yar ee ka soo baxda balaastiga. Warshadu waxay bilowday shaqo 1748!
Wixii caddeyn ah, tixgeli habka ku saabsan tusaalaha ka mid ah isugeyn la'aanta biyaha ee Ceresit CE 40 Aquastatic:
2kg oo baaldi qalalan, qaado 0.6 L oo biyo ah + 15 ... + 20 ° S.
Isku dar waxaa lagu shubay biyaha si tartiib tartiib ah, haddii kale waxay qaadan doontaa buro.
Qaadashada qasacada, masska soo baxay waxay isku dhafan yihiin ilaa inta ay kudhowaan (markaad dhageeysid saacada 400-800 rpm).
Marka la eego in isku dar ah "isku mid", waxay ku hadhaa 5-7 daqiiqo, oo ay ku xigto mar kale.
Ka dib marka la sugo isla wakhtigaas, qashinka waxaa lagu dabaqayaa hulalka u dhexeeya foornada.
Sida aad arki karto, ma jirto wax khatar ah. Dabcan, qiyaasta iyo tirada, iyo sidoo kale muddada soo-qaadashada isku dhafan kala duwan ayaa ka duwanaan doona (taasi waa tilmaanta), laakiin waxaan haynaa fikrad guud.
Shaqada ugu weyn ee shaqadu sidoo kale waxay ku jirtaa xoogga mid kasta. Oo aan kala duwanayn, lakabka hore ayaa isbeddela ama mid cusub ayaa la dhigaa. Tan waxaa lagu arki karaa iyada oo la akhrinayo habka.
Ogow waxa dhirta gudaha ah lagu talinayo in lagu dhejiyo xafiisyada, qolalka jiifka, iyo balakoonka.
Dib-u-hagaajinta goobaha hore
Marka la diyaariyo isku dar ah, bilow codsigeeda:
Ku dhaji qadar yar oo kudhaca spatula, qaybta ayaa la dhigaa, riixaya qoto dheer. Isla mar ahaantaana isku day in aad xajistaan ​​xagasha (qiyaastii 30 ° ilaa foornada).
Ugu horreyn, xalka ayaa lagu dabaqayaa dhammaan dhinacyada, kadibna kaliya - marka lagu jiro. Ku bilaw geesaha ugu muuqda, iyaga oo ka gudbaya dhinaca sare ilaa hoos, si aanay u dhicin seamaanka hore loo dhammaystiray.
Qodobbada saaran foornada si dhakhso ah ayaa looga saaraa spatula, ka dibna ku dheji weel qoyan. Waxay si dhaqso ah u adkaadeen, sidaa u dhaqso.
Goobta dhamaystirtay si tartiib ah u gudbiso trowel (ama isbuunyo, ku duuban maro qallalan).
Isku toosinta seerkana sidan, sug ilaa inta ay yaraanayaan. Tani waa waqtiga ugu fiican ee isku dhafan: bacda kabtanka waxay ku haboonaan doontaa, taas oo waxoogaa yar lagu riixo lakabka cusub iyo dhererka oo dhan. Qayb ka mid ah kuleylka ayaa dhici doona ama tagi doona faybar - ka saar.
Dabadeedna waxay joogtaa maalin ama laba. Taasi waa inta ay qaadaneyso lakabka si ay u adkaato waxaana lagu nadiifin karaa warqad ciriiri ah, oo isku dayaysa in aan xoqin lafta laftiisa.
Waa muhiim! Waa inaadan qoyin suufka aad u badan - sidaas darteed ma aha wax la yaab leh iyo in la dhaqo qeyb ka mid ah qashinka cusub.
Video: cusbooneysi xubnaha jirka
Guud ahaan, hawshu waa mid suurtogal ah. Dhab ahaan, derbiyada jirtana waqti ka waqti ayaa jira dhibaatooyin - meelaha qaarkood mararka qaarkood waxay u dhaqmaan sida "dhoobo". Markaad ka shaqeyneyso meelahaas waxaad gelisaa xalka yar (taas oo mustaqbalku mustaqbalka ku badbaadin doono jajab).
Goobaha xajmiga ee foornooyinka cusub ee la dhigo
Tiknoolajiyada dalbashada dareenada cusub waxay ku dhowdahay shaqada oo ay la socoto qadiimintii hore - wax-qabadka ugu wayni waa isku mid. Laakiin waxaa jira waqtiyo xusuusinaya:
Hulalka ayaa lagu farsameeyaa asal (haddii ay suurtagal tahay, yareeyo soodhada), oo kaliya ka dib marka ay ka baxaan waxay ka cabsiinayaan badaha.
Jihada xuddunta ee trowelka ayaa sidoo kale isbedelaya - xajmiga xajmiga wuxuu ku habboon yahay maro cusub.
Isku dar waxa ay qaadataa waxoogaa ka badan, haddii ay jiraan wax yar-yar oo ka hooseeya geesaha foornada (xad-dhaafka ayaa dhaqaya mar kasta).
Waxaa lagugula talinayaa in aad la shaqeyso goobo yaryar: mid laga shaqeynayo "square" - wuxuu bilaabay mid kale.
Inta ka hartay nidaamka dib u soo celinta algorithm ee cusboonaysiinta dusha.
Video: sida loo tuuro qalabka dhismaha
Waa suurtagal in la nadiifiyo seeraha iyo miraayada kaddib marka la qalajiyo dhamaystirka, iyo sida caadiga ah 1.5-2 toddobaad. Nadiifinta ugu horreysa ee isku dhafka waxaa badanaa lagu sameeyaa hab qallalan - xoqan ama burush jilicsan oo jilicsan ayaa dhex maraya lakabka sare ee sare. Tani waxay ka saartaa wasakh iyo boodhkii soo galey xalka markii la daweyn lahaa. Cadaadiska adag ma aha mid lagama maarmaan, haddii kale waxaa jira halis ah in laga saaro qayb ka mid ah isku darka la qaboojiyey.
Ma taqaanaa? Mastarada waxaa ka mid ah qaybta dibedda ee loo yaqaan "biscuit".
Waqtigan gaarka ah, lakabka cusub ayaa lagu daaweeyaa iyadoo la xoojinayo burooyinka: polymers, biyaha kululeeyaha ama shubka. Waxay ka soo noqdaan qoyaan, iyo dhibcooyinka hoos u dhaca hoos udhaca, oo ha dhex gelinin gudaha. Ka dib markaad sugeysid ilaalinta qalalan, waxaad bilaabi kartaa nadiifinta qoyan ee foornada leh ee isbuunyo iyo dhar qoyan biyo ama qalab khaas ah.
Video: sida loo nadiifiyo foornada
Ku habboon tan:
Kiimikada iyo maaddooyinka daryeelka tufaaxa.
Xalka saabuun ee ku salaysan saabuun ama shaambo dareere ah.
Xalka barafka liito.
Ammonia. Waxay xoojiyeen meelaha ugu dhibaatada badan, oo hore loogu rusheeyey soodhada caadiga ah.
Maqaarka cad ee soo haray ka dib nadiifinta qoyan waxaa la saaraa qalajinta dhamaystiran (oo leh qalalan qoyan ama qoyan).
Suulasha loogu talagalay ujeedooyinkaas sida caadiga ah looma isticmaalo - kareemadu waxay xoqan dusha si siman.
Sida loo daryeelo faybarka
Si loo helo foorno muddo dheer ah si ay uga farxiso isha iyadoo la eegayo muuqaalkiisa aan fiicnayn, waxay u baahan tahay daryeel fudud, laakiin joogto ah: ugu yaraan hal mar bishii waxaa lagu talinayaa in si buuxda loo dhaqo dusha oo dhan oo leh saabuun gaar ah.
Waa muhiim! Ku dhaqista qalabyada, laguna daweeyo silikoon, waa inaadan sameynin dadaal weyn - walxahan waa mid sahlan.
Haddii kale, shuruucda lagu xakamaynayo fayadhka waxaa lagu yareynayaa:
Kala saarista dhirbaaxada ka timaadda dusha sare (waa inaysan jirin wax isbuunis ah).
Mar mar ku tirtir maro jilicsan oo qoyan xal xashiish ah, taasoo ku daraysa iftiin.
Sidoo kale waxay khuseysaa khamriga ama vodka (inkastoo ay qaadan doonto wakhti cimilada).
Si taxadar leh u qabashada fayada. Waxaa lagugula talinayaa inaadan ku tiirsaneynin qalab fiiqan ama culus iyo waxyaabo kale oo keeni kara xoqid.
Haddii ay suurtogal tahay, iska ilaali inaad soo dhigto santuuqyada udhexeeya alkalis xoog leh - sida foorno xaafadeed oo kale waxay halis u tahay inay lumiso iftiin.
Waxaan bartay sida loo xoqdo dhejinta inta u dhexeysa kirada. Waxaan rajeyneynaa in akhristayaasheena si sahlan u farsameyn doonaan farsamadaan, natiijada kama dambeysta ahna ma keeneyso wax kasta oo xirfadle ah. Mashruucan oo dhan waa la guulaysan karaa!
Waxaa jiray fikrad ah in lagu tirtiro qalabka wax lagu daboolo oo leh qalabka wax lagu daboolo, iyadoo la raacayo maaddada silikonta - daboolka foornada oo dhan oo ay weheliyaan seeraha oo leh cajalad muuqaal ah, ka dibna jarjarida mindida leh mindi, adoo isticmaalaya faashadda iyo, ka dib markaad ka baxdid, ka saar cajaladada.
Waxan u soo jiiday sidan: Waxaan codsanayaa foorisho leh trowel caag ah 4-5 mitir oo laba jibbaaran. (ka dib marka la bilaabo bilaabista 30-40 daqiiqo baaskiilka.), oo markaa oo kaliya la soco mindhicir jilicsan oo aan bilaabo inaan xoqo. Isla mar ahaantaana, qashinka ayaa horey u qalajiyey (waxay ka sii deyneysaa lafaha laftiisa), laakiin sidoo kale kama soo baxo isgoysyada.